काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको बढ्यै, तर छैन सावधानी ! - समय-समाचार
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको बढ्यै, तर छैन सावधानी !
Oct 4, 2020 काेराेना परिक्षण, काेराेना भाइरस, काेराेना संक्रमण
काठमाडौं, असोज १८। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाईरस संक्रमण दर बढ्दो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा संक्रमितको संख्या ८४ हजार ५७० नाघेको छ । तर, जनस्तरमा भने कोरोना संक्रणको जोखिलाई खास ध्यान नदिएको देखिन्छ । कतिपय सार्वजनिक स्थानहरुमा स्वास्थ्य समन्त्री कुनै मापदण्डै अपनाईएको छैन ।
कोरोनाका कुल संक्रिय संक्रमितमध्ये ५७.५३ प्रतिशत संक्रमित उपत्यकामा मात्रै रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तगर्तको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशखाको तथ्यांकअनुसार देशैभर कोरोना संक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार ३०२ पुगेको छ ।
सङ्क्रमण बढ्यो, सेवाग्राहीको भीड घटेन
उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दैनिक बढिरहे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड कम हुन सकेको छैन । यातायात कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सामाजिक दुरी कायम गर्न भन्दै अनुरोध गर्दै हात धुनका लागि साबुनपानीको व्यवस्था गरेको छ । सेवाग्राही भने आफ्नो काम चाँडो सकाउने हतारका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउन ध्यान नदिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, हिजो २४ घण्टाको विवरण अनुसार नेपालमा बितेको २४ घण्टामा २१२० थप जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा १२ हजार ९७८ नमुना परीक्षण गर्दा ७६६ महिला र १३५४ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
सरकारी तथ्यांकमा यससँगै कुल संक्रमितको संख्या ८४ हजार ५७० पुगेको छ । उनीहरुमध्ये ५२८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६२ हजार ७४० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । २०४४ जना पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र कोरोना संक्रमणमुक्त भएका हुन् ।
प्रवक्ता गौतमका अनुसार देशभर २१ हजार ३०२ संक्रिय संक्रमित छन् । ११ हजार ५२९ जना होम र ९ हजार ७७३ जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् । उनीहरुमध्ये २१७ जनाको आईसीयू र ३१ जनाको भेल्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शनिबार थपिएका संक्रमितमध्ये ११७७ जना उपत्यकाका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा काठमाडौंका १००१ जना, भक्तपुरका ६७ र ललितपुरका १०९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झापा र दैलेखका ९/९ जना, सिराहा, धादिङ, नुवाकोट र नवलपुरका ८र८ जना, उदयपुर र पाल्पाका ७/७ जना, रामेछाप, गोरखा, कपिलवस्तु, नवलपरासी र प्युठानका ६/६ जना, खोटाङ, महोत्तरी, सर्लाही र कञ्चनपुरका ५/५ जना, ओखलढुंगा र दोलखाका ४÷४ जना, संखुवासभा र लमजुङका ३/३ जना, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, गुल्मी र डडेलधुराका २र२ जना तथा पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ,रोल्पा, कालीकोछ, दाचुृला, बझाङ र बाजुराका १÷१ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
कस्तो छ विश्वभरको अवस्था ?
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट एकै दिन २ लाख ९४ हजारभन्दा बढीमा मानिसमा संक्रमणको पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वमा थप ४ हजार ७९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ करोड ५१ लाख २२ हजार २७६ पुगेको छ । संक्रमित १० लाख ३७ हजार ५२४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिले ७९ लाख ६७ हजार ५१६ जनामा सक्रिय संक्रमण छ । जसमध्ये ६६ हजार २६७ को अवस्था गम्भीर छ ।अहिलेसम्म २ करोड ६१ लाख १७ हजार २३६ जनाले कोरोनालाई जितेका छन् । सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको अमेरिकामा संक्रमितको संख्या ७६ लाख नाघेको छ ।
कोरोना भाइरसकै संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरूमा २ लाख २४ हजार ६२६ जनाको मृत्यु भएको छ । ५२ लाख ६१ हजार ८३४ जना संक्रमित भएकोमा २५ लाख ९९ हजार ९७५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा ३ लाख १५ हजार ६३१ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या ९० लाख ८४ हजार ६०९ पुगेको छ । त्यसमध्ये ५८ लाख ९६ हजार २४० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा १ लाख ९९ हजार ८५७ जनाको मृत्यु भएको छ । १ करोड ९ लाख ७७ हजार ५७८ जना संक्रमित भएकोमा ९२ लाख ४७ हजार ४१७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा २ लाख ६० हजार ४७८ जनाको मृत्यु भएको छ । ८२ लाख ५६ हजार ५२० जना संक्रमित भएकोमा ७० लाख ९५ हजार ३७५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा ३६ हजार ३९९ जनाको ज्यान गएको छ भने १५ लाख १४ हजार ८१३ संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये १२ लाख ५३ हजार ३४४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरूमा ९३५ जनाको मृत्यु भएको छ । ३१ हजार ५३९ जना संक्रमित भएकोमा २८ हजार ७७५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
भारतमा मात्रै संक्रमितको संख्या ६५ लाख ४७ हजार ४१३ पुग्यो
त्यस्तै, भारतमा विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसबाट भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७५ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित बनेका छन् । दैनिक संक्रमित संख्यामा बृद्धि हुँदै गएको भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७५ हजार ४७९ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
योसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या ६५ लाख ४७ हजार ४१३ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म ५५ लाख ६ हजार ७३२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ९ लाख ३८ हजार ८६९ जनाको उपचार भइरहेको छ । यस्तै भारतमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख १ हजार ८१२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ थप ९३७ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।